As of Sat, 11 Jul, 2020 12:50
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङमा चालु वर्ष आएको अनुदान बजेट फ्रिज हुने भएको छ । कोरोना कहर र प्रदेश सरकारबाट ढीलो गरी अख्तियारी आउँदा वजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थलमध्ये राराताल पनि एक हो । कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा पर्ने यो ताल आजभोलि पर्यटकको आवागमन न्यून छ । आजभोलि रारा तालमा फाटफुटमा घुम्न आउने गरेका छन । विगतका दिनहरूमा यति बेला रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गथ्र्यो । राराको सौन्दर्य मात्र नभई राजस्व संकलनमा पनि उत्तिकै फड्को माथ्र्यो । यस वर्ष विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले गर्दा रारामा उठ्ने राजस्व भने यस वर्ष कोरोनाले खाएको छ ।
भारतीय सीमामा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य सस्तो रहेको छ । इन्धनको मूल्य अन्तर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा नेपालमा अहिले इन्धन प्रतिलिटर ४० रूपैयाँसम्म सस्तो रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार रक्सौलमा पेट्रोल १ सय ३४ नेपाली रुपैयाँ पर्छ भने डिजलको मूल्य १ सय २४ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सबैलाई बचाउन सक्दो प्रयास गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले सबै सुरक्षित भएर बैंकिङ प्रणालीलाई पनि बचाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतीले पारित भएको हो ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेको छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको विकास तथा प्रविधि समितिले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोगलकको पालना गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध विभिन्न मजदुर र व्यवसायी संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि समितिले आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर ट्याक्सी सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले बढेको छ । साताको दोस्रो दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा मंगलबार ७ सय रुपैयाँले बढेर ९० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो ।
सरकारले वस्तु तथा सेवामा बजारको तीन तह निर्धारण गरेको छ । बजारको धेरै तह हुँदा उत्पादकले लागतअनुसार मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता गरी बजारको तीन तह निर्धारण गरिएको हो ।
नेपालकै प्रमुख प्रवेशद्वार वीरगन्ज रक्सौल अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बन्द छ । वीरगन्ज रक्सौल नाका बन्द हुँदा वीरगन्जको व्यापारमा भने सुधार आएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेको वीरगन्जको व्यापारलाई काठमाडौंले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेपनि यहाँका व्यापारीहरुले भने सीमा नाका बन्द हुँदा अवैध व्यापार रोकिएपछि वीरगन्जको वैध व्यापारमा सुधार आएको बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अ
गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका ११ स्थानीय तहका लागि २५ करोड भन्दा बढि अनुदान रकम छुट्टाएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा गोरखाका ११ स्थानीय तहका लागि २५ करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानका रुपमा बजेट छुट्टाएको हो । जसअनुसार गोरखा नगरपालिकालाई समानिकरण अनदानका रुपमा १ करोड २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सशर्त अनुदान अन्तरगत १० किलो शिखर डाँडा लुदिखोला सडकमार्गका र विन्धबासिनी डेरागाउँ सडक निर्माणका लागि ३०-३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान अन्तरगत पाटेचौर रानीवन पन्थेश्वारा पिपलथोक भिमसेनपार्क गोरखा दरबार सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि १२ जनाले दरखास्त दिएका छन् । बोर्डका सिईओ महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि खाली रहेको बोर्डको सीईओको लागि १२ जनाले दरखास्त दिएका हुन् । असार ५ गते दरखास्त आह्वान गरेकोमा शुक्रबारसम्म अन्तिम आवेदनको समय थियो । छनोटका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपाल सदस्य गठन गरेको छ ।